Allgedo.com » Dr. Daahir Cabdulaahi Muumin oo ka warbixiyay sida uu u arko dhisidda maamul goboleedka Jubooyinka iyo Gedo.
Dr. Daahir Cabdulaahi Muumin oo ka warbixiyay sida uu u arko dhisidda maamul goboleedka Jubooyinka iyo Gedo.
Print here| By: allgedo.com: Saturday, January 19, 2013 // 3 Jawaabood
Waxaa Noo suurta gashay inaan wareysi ka qaadno Dr. Daahir Cabdulaahi Muumin oo ah aqoon yahan ku noolaa dalka Yemen mudo badan. Waraysigaas waxaa uu taabanaya arrimo badan oo xasaasi ah oo khuseeya Gobolada Jubooyinka iyo Gedo, waraysigiina waxa uu u dhacay sidatan:-
Su’aal: Maxaad kala Socotaa sida uu u socdo dhismaha maamul Goboleedka Jubbaland ee uu hadda qorshihiisa socdo?
Jawaab: Waxba kalama socdo, waayo waxaan arkaa qilaaf baahsan oo soo dhexgalay dadka wada abaabulka dhismaha Jubbooyinka iyo Gedo?
Su’aal: Yaa xaq u leh in ay hogaamiyaan ama hor kacaan dhismaha Dowlad Goboleed ay yeeshaan gobolada Jubooyinka iyo Gedo?
Jawaab: Waxaa xaq u leh bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo kaashanaya dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Su’aal: Ciidamada wata magaca dowladda oo kaashanaya kuwa Ahlu Sunna Wal Jameeca iyo Maleesiyada Raaskaanbooni malaga yaabaa inay mustaqbalka isaga hor yimaadaan farsamada ugu haboon ee maamul loogu sameyn karo gobolada Jubooyinka iyo Gedo?
Jawaab: Waa laga yaabaa, maxaa yeelay waxaa jira fikrado ay kala aaminsan yihiiin kooxaha hubeysan ee aad xustay, maxaa yeealay ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunnna waxay qabaan in sida Dastuurka Dowladda Federaalka ku qoran in cidda iska leh awoodda maamul sameynta gobolada Jubbooyinka ay tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Jubbooyinka iyo Gedo oo gacan ka helaya dowlada Soomaaliya, halka Raaskaambooniyiintu ay qabaan in maamul u sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gedo looga danbeeyo dowladda Kenya.
Su’aal: Maleeshiyada Raaskaambooniyiinta maxaa u diiday inay ku biiraan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, halka ay qaab jabhadeed ku socdaan ayada oo dalkana uu leeyahay dowlad rasmi ah?
Jawaab: Dabcan, laga yaabe inay jiran maslaxad iyaga qas u ah oo ka timid wadamada deriska ah, taas ayaanan u saamaxeyn inay ku biiraan ciidamada XDS, laakiin waxay ku qasban yihiin inay ku biiraan Ciidamda XDS si loo afjaro qilaafadka soo jireenka ah, lana garto maslaxada ummada Soomaaliyeed iyo shacabaka ku dhaqan goboladaas.
Su’aal? Sidee maamul lagu dhisi karaa iyadoo ay qeybo muhiim ah oo ka tirsan goboladaas ay wali ka taliyaan xarakada Al-shabaab?
Jawaab: Waa Su’aal Muhiim ah oo loo baahan yahay in la’s weydiiyo. Sida ay qabaan inta badan dhamaan beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Jubbooyinka, haddii aanan gobolada Jubooyinka iyo Gedo laga saarin Al-shabaab suurtagal ma ahan in la dhiso maamul loo dhan yahay oo ay ka wada qayb galaan Odoyaal Dhaqameedka iyo Siyaasiyiinta kaso jeeda gobolada la rabo in loo sameeyo maamul goboleedka.
Su’aal: Dowladda Kenya waxay rabtaa inay hesho nidaam maqaar saar ah oo ayada ka amar qaata in laga dhiso gobolada Jubbooyinka iyo Gedo, Itoobiyana sidoo kale ayay rabtaa, marka sidey ku suurto gali kartaa ayada oo uu xaalku sidaas yahay oo aanay muuqan dowlad dhexe oo awood u leh in ay sugto amniga goboladeeda in laga madax banaanaado faragalinta ay ku hayaan dowladaha deriska ah maamul u sameynta gobolada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Jubbooyinka?
Jawaab: Waa su’aal fiican, laakiin waxaad ogaataa si kasta oo aan u tabar daranahay in aanay habooneyn in cidna gurigeeda loo maamulo. Ciddii na siineyso wixii taageero ah oo dhanka Loojistikada ah waan soo dhaweynaynaa, laakiin uma baahnin in nalagu addeegto. Su’aasha dhinaceeda labaad, markaan aniga iska soo qaado suurtagal ma ahan inaan isu dhiibo nin shisheeye ah oo aan iraahdo “adiga ii tali” oo aan ka tago nin ehelkay ah. Tan kale, waxaa kale oo aan qabaa in sida kaliya ee looga gudbi karo faragalinta wadamada deriska ah in ay tahay, haddii Dowlada dhexe howsha loo xilsaaray ay u gudato si ay wadaninimo ku jirto, isla markaana ilaaliso maslaxadauUmmada Somaaliyeed.
Cabdi-weli Nuur, Sana/Yemen.
3 Jawaabood " Dr. Daahir Cabdulaahi Muumin oo ka warbixiyay sida uu u arko dhisidda maamul goboleedka Jubooyinka iyo Gedo. "
waa waraysi dhinacyo badan taabanaya, waxaad ogaataan qoladii tashanwaysa in loo talinayo, cidaydoontaba ha u talisee. Waxba micno ah masamaynayso in mooryaan xamar isbaaro u taal loo afgobaadsho. Muhiimku waa in maamul lahelaa.
ilma adeerayaalow iska daaya waxaan macno badan idiinkeenaynin maxaa yeelay waxaad leedihiin raaskiyaanbooni waa maleeshiyo beeleed waa suaale maxay tahay Ahlu-suna?
dadka aad waarsataan iyo idinkuma waxaan is dhahaa ma dhimirkaa lagaga jiraa.mida kale reer muqdisho haday wax tari lahaayeen iyagaa isu tari lahaa ee adiga wax kaa dhigi maayaan ee iska daaya saad qoys u tihiin ??????? waa dadkaas liita ee aan waxba ahayn marka karaamadiina ha iskaga qaadina ????.
Waa wareesi aad u xiiso badan
Waxaad moodaa inuu runta taabanaayo
Koox kenya itaal badeeso ayaa rabto inay dhul dad leeyihiin xoog ku maamusho